Imibandela Yokusebenza - Word.to
I- Word ku-PDF
I-PDF ku- Word
IZwi.to Imigomo Yesevisi
Ngokungena kuwebhusayithi ku- https : //word.to , uyavuma ukuboshwa yile migomo yesevisi, yonke imithetho nezimiso ezisebenzayo, futhi uyavuma ukuthi unesibopho sokuhambisana nanoma yimiphi imithetho yendawo esebenzayo. Uma ungavumelani nanoma iyiphi yale migomo, uvunyelwe ukusebenzisa noma ukufinyelela leli sayithi. Izinto eziqukethwe kule webhusayithi zivikelwe umthetho osebenzayo we-copyright nophawu lwentengiso.
Imvume inikezwe ukulanda okwesikhashana ikhophi eyodwa yezinto (imininingwane noma isoftware) kuwebhusayithi yeWord.to yokubuka okwakho okungahambisani nokuhweba kuphela. Lesi yisibonelelo selayisense, hhayi ukudluliswa kwetayitela, futhi ngaphansi kwale layisensi awunaku:
ukuzama ukubola noma ukuguqula unjiniyela noma iyiphi isoftware equkethwe kuwebhusayithi yeLord.to;
dlulisa izinto zomunye umuntu noma 'isibuko' izinto ezikunoma iyiphi enye iseva.
Le layisensi izonqamuka ngokuzenzakalela uma wephula noma iyiphi yale mikhawulo futhi ingaqedwa nguLord.tot nganoma yisiphi isikhathi. Lapho umisa ukubuka kwakho kwalezi zinto noma ukunqanyulwa kwale layisensi, kufanele uchithe noma yiziphi izinto ezilandiwe onazo noma ngabe zisefomethi kagesi noma ephrintiwe.
Izinto ezisewebhusayithi yeWord.to zinikezwa ngesisekelo se-'as is '. I-Word.to ayenzi ziqinisekiso, eziveziwe noma ezisikiselwayo, futhi ngalokhu iyazilahla futhi iziphikise zonke ezinye iziqinisekiso ezibandakanya, ngaphandle komkhawulo, amawaranti ashiwo noma imibandela yokuthengiselana, ukufaneleka ngenhloso ethile, noma ukwephulwa kwempahla enobuhlakani noma okunye ukwephulwa kwamalungelo.
Ngaphezu kwalokho, iLord.to ayigunyazi noma yenze izethulo maqondana nokunemba, imiphumela engaba khona, noma ukwethembeka kokusetshenziswa kwezinto ezisetshenziswayo kuwebhusayithi yayo noma ezihlobene nokunye okunjalo noma kunoma yiziphi izingosi ezixhumene naleli sayithi.
Akunakwenzeka ukuthi i-Word.to noma abahlinzeki bayo babe nesibopho sokulimala (kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, umonakalo wokulahleka kwedatha noma inzuzo, noma ngenxa yokuphazamiseka kwebhizinisi) okuvela ekusetshenzisweni noma ukungakwazi ukusebenzisa izinto ezikwi-Word.to's iwebhusayithi, noma ngabe uLizwi.to noma ummeleli we-Word.touthorified aziswe ngomlomo noma ngokubhaliwe ukuthi kungenzeka kube nomonakalo onjalo. Ngoba ezinye iziphathimandla azikuvumeli ukulinganiselwa kumawaranti ashiwo, noma imikhawulo yesikweletu ngokulimala okulandelanayo noma okungahle kwenzeke, le mikhawulo kungenzeka ingasebenzi kuwe.
Izinto ezivela kuwebhusayithi yeLord.to zingafaka amaphutha ezobuchwepheshe, ezokuthayipha, noma ezithwebula izithombe. ILord.to ayigunyazi ukuthi noma yiziphi izinto ezisewebhusayithi yayo zinembile, ziphelele noma zikhona manje. ILord.to ingenza ushintsho ezintweni eziqukethwe kuwebhusayithi yayo nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso. Noma kunjalo i-Word.to ayenzi ukuzibophezela ekuvuseleleni izinto.
ILord.to ayikazibuyekezi zonke izingosi ezixhunyaniswe newebhusayithi yayo futhi ayinabo obhekene nokuqukethwe kwanoma iyiphi isayithi enjalo exhumekile. Ukufakwa kwanoma yisiphi isixhumanisi akusho ukugunyazwa nguLord.to kusayithi. Ukusetshenziswa kwanoma iyiphi iwebhusayithi exhumene kanjalo kusengcupheni yomsebenzisi.
ILord.to ingabuyekeza le migomo yesevisi yewebhusayithi yayo nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso. Ngokusebenzisa le webhusayithi uyavuma ukuthi uzoboshwa yinguqulo yamanje yale migomo yesevisi.
Guqula kusuka eZwini
I- Word iye ku-JPG
I- Word kuya ku-PNG
I- Word ku-Excel
I- Word iye ku-HTML
I- Word ku-PowerPoint
I- Word to ePub
I- Word ku-JPEG
I- Word to PPT
I- Word kuya ku-PPTX
I- Word ku-XLS
I- Word ku-XLSX
I- Word eya ku-ICO
I- Word ku-BMP
I- Word ku-SVG
I- Word ku-GIF
I- Word ukuthumela i-imeyili
I-DOCX ibe yi-PDF
I-DOCX iye ku-JPG
DOC kuya ku-PNG
I-DOCX kuya ku-PNG
DOC kuya ku-XLS
I-DOCX kuya ku-XLS
I-DOCX kuya ku-XLSX
DOC kuya ku-SVG
I-DOCX iya ku-ICO
I-DOCX kuya ku-BMP
I-DOCX kuya ku-SVG
I- Word ku-WebP
I- Word eya ku-TIFF
DOCX kuya ku-TIFF
I Word kuPSD
I-DOCX kuya ku-PSD
Guqulela ku- Word
I-JPG iye kwi- Word
PNG ku- Word
I-JPEG ku- Word
DOC ku- Word
I-DOCX ku- Word
I-SVG ku- Word
ICO ku- Word
I-BMP ku- Word
I- Word eya ku-DOCX
I- Word ku-DOC
DOCX kuya ku-DOC
I-PDF iye ku-DOCX
I-JPG iye ku-DOC
I-JPG iye ku-DOCX
I-PNG iye ku-DOC
I-PNG iye ku-DOCX
I-ICO iya ku-DOC
I-ICO iya ku-DOCX
I-BMP iya ku-DOC
I-BMP iye ku-DOCX
I-SVG iye ku-DOCX
I-WebP iya ku-DOCX
I-WebP iya ku-DOC
I-WebP ku- Word
I-GIF ku- Word
I-GIF eya ku-DOCX
TIFF ku- Word
TIFF kuya ku-DOCX
I-PSD iya kwi Word
I-PSD iya ku-DOC
I-PSD iye ku-DOCX
75,601 ukuguqulwa kusukela ngo-2020!
Yenziwe ngu nadermx - © 2021 Word.to